चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको भ्यक्सिन अब सबैभन्दा पहिले विश्वलाई चीनले नै वितरण गर्ने ! – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको भ्यक्सिन अब सबैभन्दा पहिले विश्वलाई चीनले नै वितरण गर्ने !
एजेन्सी । चीनको उहान वाट सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले अहिले विश्व ढाकेको छ । युरोपियन मुलुक हुँदै अहिले एशियाको भारतमा पनि यसले निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । अमेरिकामा लाख मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने भारतमा लाखौं मानिस प्रभावित भएका छन् । निधन हुनेको संख्या पनि भारतमा हजारौंमा छ । नेपालमा पनि दिनहुँ यसको प्रभाव बढ्दै छ । चीनले आफ्नो मुलुकवाट कोरोना सुरु हुनासाथ त्यसको विरुद्धको भ्याक्सिनको अनुसन्धानमा लागेको थियो । विश्वका अन्य मुलुकका अनुसन्धानकर्ता र चिकित्सक भ्याक्सिनमो परिक्षणमा जुटेका छन् ।
चीनले भ्याक्सिन उत्पादनमा एक फड्को अघि बढेको संकेत दिएको छ । चीन बाट सुरु भएर विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको भ्यक्सिन अब सबैभन्दा पहिले विश्वलाई चीनले नै वितरण गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।वुहान इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्ट्स र बेइजिङ इन्स्टिच्युट अफ बायोलोजिकल प्रोडक्टले तयार गर्दै गरेको कोरोनाविरुरद्धको भ्याक्सिन उपयोगी हुने ठूलो सम्भावना रहेको जनाइएको छ । बीबीसी हिन्दीले पनि यसको विश्वनियतामा समाचार निर्माण गरेको छ । लामो समय देखि चीनका अनुन्धानकर्ता यसको भ्याक्सिन निर्माणमा जुटेका थिए । आफ्नो मुलुकवाट फैलिएको रोगको निवारण पनि चीनले नै गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । चीनले तयार पारेको भ्याक्सिन मानवमा परीक्षण सफल भएमा त्यो सम्भव हुने छ । चीनले पहिलो चरणमा २ हजार मानिसमा परिक्षण गरेको र त्यो सफल भएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो सफलतासंगै चीनको एसेट्स सुपरविजन एण्ड एडनिनिस्ट्रेशन कमिशनले यसको सम्भावनाबारे व्यक्त गरेको छ । उसले अहिले दोस्रो चरणमा रहेको भ्याक्सिन परीक्षण भइरहेको र त्यो सफल भएमा यही वर्षको डिसेम्बर सम्म सर्वसाधारणको प्रयोगका लागि बजारमा ल्याउने र विश्वलाई वितरण गर्नसक्ने समेत उल्लेख गरेको छ । कमिशनले भनेको छ, अहिले यो भ्याक्सिन दोस्रो ट्रायलमा छ । चीनले यसअघि मार्च २९ मा चिनियाँ सोसल मिडिया प्लेटफर्म विच्याटमा यस भ्याक्सिनबारे जानकारी दिएको थियो । परीक्षणमा रहेको उक्त भ्याक्सीन यसै वर्षको अन्त्य वा अर्को वर्ष (सन् २०२१) को सुरुवातमा बजारमा आउन सक्ने बीबीसी हिन्दी ले समेत उल्लेख गरेको छ ।
पोखरामा प्याराग्लाइडिङमा यसरी रमाएका थिए इरफान खान
बेलायतले आफ्ना नागरिक लैजानका लागि १४ वटा चार्टर विमान भारत पठाउने
पोखराकी सबी भण्डारीको पनि अचानक निधन